Ayyaana Cuuphaa Gondaritti waltajjii jigee namoota galaafate ogeessi ijaare maal jedha? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Kumaatamni wal-tajjii jige kana irratti miidhamniiru.
Kabajni ayyana Cuuphaa Gondaritti yeroo kabajamu namoonni hirmaatan, keessumaa keessumoonni akka lafa ol-ka'aa ta'eerra taa'anii sirriitti arguu danda'aniif jecha waltajjiin ni ijaarama.
Haaluma walfakkaatuun bara kanallee lakkoofsi hirmaattotaa dabaluu danda'a yaada jedhuun waltajjii kanaan dura ture tokkotti dabaluun waltajjiiwwan sadii ijaaramaniiru jedha Itti-gaafatamaan Qajeelcha Waajira Aadaafi Turiizimii magaalaa Gondar Obbo Aschaaloo Warquu.
Waltajjiin kan baranaa kun namuma kanaan dura hojjechaa tureen kan hojjetamu isaa ibsuun, kan hojjetames baayyina mukaa kanumaan dura ittiin hojjetameen jedhu Itti-gaafatamaan kun.
Ogeessi waltajjii kana ijaare ammoo Obbo Wandim Baqqalaa jedhama. Namni kun gaandaa bishaanii mooraa Atse Faasilaadas kana keessa jiru ayyaana Cuuphaadhaaf miidhagsuufi waltajjii ijaaruu waggoota kudhan darbaniif hojjechaa turuu dubbata.
Hojii waltajjii kanarratti dizaayina walfakkaatu akka fayyadamu kan himu ogeessu kun, "waltajjii bara kanaa kanan hojjedhes mukan yeroo kaanillee fayyadameen walqixa," jedha.
Waltajjiin bara darbe ijaaramellee mukti dulloome keessaa baafamee haaromfameera jedha.
Waltajjiiwwan dabalataa sadii bara kana ijaaraman keessaa tokko kan hojjete Obbo Wandimmidha. Waltajjii isa bara darbees kan hojjete Obbo Wandimmumadha.
Obbo Wandim akka jedhutti, waltajjii inni ijaareefi kan biraa bara kana hirriyoonni isaa ijaaran haaluma nagan keessumsiisaa turanillee, kan ofii isaa inni bara kana ilaale garuu jiguun balaa kana qaqqabsiisuu danda'eera.
"Isa karaa fuula duraa jiru humni ittisaa eegaa waan tureef, baayyinaan namoonni karaa duubaa dhufan baayyyinaan irra koran. Namoonni eegumsaaf achirra turan, dhaabsisuun isaanirra ture.
Warri kaan namoonni hanga humna isaanii qofa namoonni akka irra taa'an wan taasifamef rakkoon irra ga'e hin turre.
Haata'u malee, inni jige kun ammoo namoonni karaa duubaa humnaa ol waan koraa turaniif, yeroo bu'aa jedhamanis waan didaniif, humnaa ol ta'ee kufuu danda'eera, " jedha.
Ayyaana Cuuphaa magaalaa Gondaritti kabajamaa ture irratti waltajjiin jiguun yoo xiqqaate lubbuun namoota 10 yoo darbu baay'een madaa'aniiru.
Odeeffannoowwan akka agarsiisanitti namoonni hedduu kan madaa'an yoo ta'u, AFP'n hakiimota hospitaala Gondar irraa odeeffachuun akka gabaasetti namootni 100 ol miidhamaniiru.
Waltajjichi kan hojjetamee ture galma faasiladas keessatti yoo tahu kumaatamni bahuun guyyaa cuuphaa Iyyesuus Kiristoos yaadachaa turan.
Tajaajila Oduu Itoophiyaa wabeeffachuun AFP'n akka gabaasetti lammiileen biyyoota alaa 15,000 tahan ayyaanicha irratti hirmaataniiru.
Suuraa gaazexessaan wal-tajjichi osoo hin jigiin dura kaase akka agarsiisutti waltajjiin sun muka haala gaariin kan jabaatee hojjetame miti.
Kibba Gondaritti gubachuu Masjiidotaa maaltu uume?
Goodayyaa suuraa Kumaatamni waltajjichi yeroo jige gaddaan ilaalaa turan.
Goodayyaa suuraa Waltajjichi muka irraa haala qulqullinaa fi jabina qabuun hin hojjetamne jedhama.
Saamu'eel Baahiruu ayyaanaaf magaalaa Finfinnee irraa gara Gondaritti kan imale reeffi namootaa yeroo baatamee bahaa ture argeera jedhe.
Namootni baay'een yeroo iyyan dhageenye. Booda waan achi keessaa baatamee bahaa ture garuu nama gaddisiisa. aati manaa koo achi keessa waan turteef jalqaba baay'ee naheen ture. Booda ergan ishee argadhee ayyaana keenya ayyaaneffachuu itti fufne.
Tesfaa Mokonnin Hogganaan Bulchiinsaaf Nageenyaa magaalaa Gondar sababa ijaarsichi qulqullina hin qabneef jige kan jedhu haaluun manichis ogeessotaan ture kan ijaarame jedhan.
Dargaggoonni baay'een sirnicha irratti hirmaachuu barbaadanii manicha irra yaabbachuun bahan.Akka malee namni waan irratti baay'ateef baachuu dadhabeeti kan kufe jedhan.
Goodayyaa suuraa Namootni baay'een miidhaman bakkichaa baafamaa jiru.
Goodayyaa suuraa Erga waltajjichi jigee boda ayyaneffanaan itti fufeera.
Goodayyaa suuraa Osoo waltajjichi hin jigiin uummata ayyaaneffachaa ture.
Goodayyaa suuraa Ayyaanni cuuphaa magaalaa Gondaritti kabajamaa ture.
Suuraan hundinuu akkaataa mirga ykn 'Copy Right' taa'eenidha.
'Kibba Gondar Makaane Iyyesuusitti Masgiidaa fi qabeenya irra miidhaan dhaqqabe'
Gondaritti shakkamtootni garee lamaan ayyaana Cuuphaa irratti dhohinsa guddaa raawwachuuf qophaa'an to'ataman